Indonesia in Focus: Tag isla markiiba Xajka ama Cumrada markii awoodi.
Tag isla markiiba Xajka ama Cumrada markii awoodi.
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (318)
(Qaybta saddex boqol iyo siddeed iyo toban), Depok, West Java, Indonesia, 23 July 2015, 00:45 pm)
Haddii aad tahay Muslimiinta iyo ruux muslim ah, waxa ay awood labada dhaqaale ahaan, iyo sidoo kale miisaan caafimaad leh, isku day isla markiiba ka dhigay qorsheynayo inuu ka tago si ay u tagaan on Xajka ama Cumrada in dalka quduuska ah ee Mecca, Saudi Arabia.
Intaa waxaa dheer in Tag Hajj / Cumrada waa amarkii Ilaah ee Quraanka iyo ku-xikma Al ah (Sunnah / Xadiiska) Nabi Muxammed.
Gaar ahaan Muslimiinta iyo muslim Indonesia sannadihii la soo dhaafay liiska ama liiska musharaxiinta Xujaydu saf helitaanka dheer, haddii 10 sano ka hor waxaan ugu fudud sugaan inta u dhaxaysa hal sano ilaa laba sano sugayeen, natiijada oo ay leedahay kootada Indonesian sannadkii tahay oo kaliya 200 kun oo dad sodcaal Xajka xilli, halka tirada codsadeyaasha ay ka badan ilaa hadda si kaamil ah u qoondeeyay siiyey in dawladda Saudi Arabia.
Sidaas liiska sugitaanka ama liiska safka kala duwan yihiin inta u dhaxaysa 5 sano ilaa 15 sano.
La yaab ma laha waxaa jiray kalkaaliso Hemo Dialysis (HD / Dialysis) ee isbitaal ku yaala Bariga Jakarta ayaa ii sheegay, in iyada iyo ninkeeda ayaa kor u saxiixay xajka si la filayo, oo uu helay liiska sugitaanka 15 sano ka dib la qorsheeyay in uu ka tago New Xajka.
Walaashaydii iga u gaar ah ayaa u saxiixay afar sano ka hor oo la qorsheeyey laba sano ka tagay cusub.
Taasi waa sababta hadda tirada dad sodcaal ah Umadda ee Indonesia ayaa sii kordhaysa, garoomada diyaaradaha bilaabay inuu buuxiyo hawada ee Indonesia xajka la filayo Cumrada.
Goobaha Hospital ee Sacuudi Carabiya, kaas oo sidoo kale dadka u Hemo Dialysis (HD / Dialysis), taasoo keenaysa tiro sii kordhaysa oo bukaanka qaba kelyaha oo si fiican u tageen Xajka, Cumrada.
Samo falku inaad ee Xajka iyo Cumrada
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah Radi anhu, in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Cumrada in Cumrada waa dembi ah waxa u dhaxeeya, iyo Xajka Mabrur abaalkiisu isaga u marka laga reebo Jannada." 
Laga soo bilaabo Ibn Mascuud Radi 'anhu, in Nabiga sallallaahu' wa yiri:
"Iringilah dhexeeya Xajka iyo Cumrada, maxaa yeelay labada dembiga iyo saboolnimada, iyo sidoo kale kabuufi dab dhimi kara saaraysaa nijaasta (miridhku) bir ah, oo dahab iyo lacag ah, mana jirto wax abaal marin Hajj Mabrur laakiin Jannada." 
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah, ayuu yiri, "Waxaan maqlay nabiga sallallaahu 'wa yiri:
Ku alla kii sameeya Hajj si daacad ah, Eebana Ilaaha Qaadirka ah oo aan naxariis lahayn oo kefasiqan, ka dibna uu dembi lahayn ku soo laabtay, sidii markuu dhashay by hooyadiis. '"
Laga soo bilaabo Ibn Cumar Radi 'anhuma, Nabiga sallallaahu' wa, ayuu yidhi:
"Dadka ku Dagaallami Jidka Eebe, iyo kuwa u tagaan Xajka iyo Cumrada, waa ergeyga ah ee Ilaah. (Marka) Ilaah yeedha iyaga, ka dibna ay ku kulmaan oo uu call. Markaasay (markii) Goortaasay weyddiiyeen, ka dibna Ilaah deeq (iyaga codsado). "
Dhinacyada Xajka iyo Cumrada waa Waajibaadka Forum ayaa hal mar kusoo mara, Wixii kasta oo Muslim, Baligh, caaqil, Freedom awoodna
Hadalka Eebe Jannatul:
"Run ahaantii, guriga markii ugu horaysay la dhisay (meel cibaadada) waa ninkii waa in Bakkah Baitullah (Maka) waana barakaysanyahay waana Hanuunka dadkoo dhan. Isaga jiraan calaamado in dhab ah, (ka mid ah) maqam ku Ibrahim; Ruuxii u galeen rag sidaa (Baitullah), wuxuuna ahaa ammaan ah; samayn Hajj waxaa waajib ah in nin Ilaah, in uu yahay, (waayo) dadka u safri kartaa Golaha. . Ruuxii diidi (waajibaadka Xajka), Eebe Mahakaya (uma baahna wax) Caalamka "[Ali Cimraan: 9697]
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah, ayuu yiri, Nabiga sallallaahu 'wa ku wacdiyaya na dhex, ayuu yidhi:
"Waa qasab in aad Xajka korkiisa, markaas bixin saboolka ah (Xajka) ah." Markaas waxaa la yidhaahdaa, "Ma sanad kasta, Rasuulkii Alle?" Markaas ayuu iska aamusay ilaa qofka la leh saddex jeer, ka dibna Nabiga sallallaahu 'wa yiri, "Haddii aan odhan haa tahay, shaki la'aan wuxuu noqon doonaa deyn ah oo dhab ahaan yuu idiin ma awoodi doonaan in ay (u qaban)." Markaas ayuu yiri, "Anigu waan ku sida aan aad ha. Sida xaqiiqada ah in dadka baabbi'inayay ka hor inta aadan wax badan oo si aad u weydiiso, oo dad badan ku raacsanayn ay Nabiga. Haddii aan ku amartay wax aad si, ka dibna u qabtaan aad intii aad guys. Oo anigu haddii aan wax u diid, markaas ka tago. "
Laga soo bilaabo Ibn Cumar Radi anhuma, ayuu yiri, "Nebigu sallallaahu wa yiri:
"Islam shan tiir saarnaa dushooda waxaa dhisay: (1) in ay jiraan waa axdiga ilaah xaq diibadahi si sax ah laakiin ma Eebe iyo in Muxammad waa Rasuulkii Eebe, (2) Ooga Salaadda, (3) Sakada, (4) Xajka Baydka ah, iyo ( 5) Ramadan sooman. '"
Laga soo bilaabo Ibn 'Abbaas anhuma, ayuu yiri, "Nebigu sallallaahu' wa yiri:
"Waa Xajka ah in aan xiiso u leh. Kuwa aanan heysan hadyu (allabari xoolaha) leeyihiin, markaas waa inuu guud ahaan bertahallul, sababta oo ah Xajka ayaa u yimid inuu Xajka tan iyo Maalinta Qiyaame. "
Laga soo bilaabo Shabi bin Ma'bad, ayuu yiri, "waxaan tegey inuu soo arko Cumar, ka dibna waxaan ku yidhi:
"O Taliyaha Mu'miniinta, dhab ahaantii waxaan lahaa diinta Islaamka, oo waan rumaysan inaan Xajka mar hore khasab ah iyo Cumrada, ka dibna waxaan ka shaqeeya cibaadada labaad bilaabay." Markaas ayuu ku yiri, "Waa inaad tilmaamaha helay-waa in ay hirgeliyaan ka Sunnah ee Nabiga. ' "